माया बाड्ने श्रवण दाई – Sirjana …….
माया बाड्ने श्रवण दाई
काठमाण्डौं ….. काठमाण्डौ ………. नेपाल
सानफ्रान्सिस्को ………… काठमाण्डौं ……. नेपाल
तिम्रो माया मेरो माया ……… नेपाल
हा हा माया निर जालै मा
ऐ कान्छी !!
गीत गाउँदै मादल ठोक्दै नाचिरहेको श्रवण दाई (श्रवण नेपाली) लाई देख्दा पश्चिमाञ्चलको कुनै रोधी घरमा पुगेको भान हुन्छ । तर ढोकाबाट बाहिर टाउको निकालेर हेर्यो भने मात्र झलास्स हुन्छ र ए म त अमेरीकाको सानफ्रान्सिस्को शहरमा पो रहेछु । टेस्ट अफ हिमालयको बिषेशता नै यहि छ । टेस्ट अफ हिमालय ले साच्चै नै हिमालयको टेस्ट दिन्छ । खानेकुरामा त नेपाली पन छ नै तर त्यो भन्दा पनि ज्यादा श्रवण दाई र उनका कुक, वेटर र अन्य कामदारहरुको आत्मियताले नेपाली टेस्ट दिइरहेको हुन्छ । साँचै, विदेशमा नेपाली रेष्टुरा खोलीसकेपछि नेपाली स्वाद आउनु नै पर्छ तर त्यसमा पनि मादलको ताल, लोक गीत र नेवारी पाराको दौरा र टोपीमा सजिएको श्रवण दाईलाई भेट्दा सुनमा सुगन्ध थपिएको भान हुन्छ । श्रवण दाईले हरेक पाहुनासँग उत्तिकै सौहार्दता र आत्मियता दिन सक्नुभएको देख्दा उनको मन कति ठूलो छ भन्न सकिन्दैन । उनको मन, उनको रेष्टुरामा आउनेको लागि मात्र हैन अरुको निम्ति पनि त्यत्तिकै फराकिलो छ । उनी आफ्नो रेष्टुरालाई माया बाढ्ने ठाउँ भन्छन् । उनले जे भनेका छन् त्यो गरेर पनि देखाएका छन् । रेष्टुरामा खान आउने हरेक पाहुनाको आदर सत्कार उनी आफै गर्छन् । उनीहरुलाई नेपाल र नेपालीको ’bout भन्नु, हात मिलाउनु, नाच गान गरेर देखाउनु उनको सत्कार गर्ने र माया बाढाउने क्रियाकलाप हुन् । आफूले बाड्ने माया त यिनै हुन् तर त्यस रेष्टुरामा आएर कतिले माया बाडे, कतिले माया साटे त्यसको हेक्का उनलाई छैन । तर हरेक सोमवार त्यहाँ हुने रोधीले भने पक्कै माया साटासाट गर्ने मौका नेपालीहरुलाई दिएको छ भन्नुहुन्छ टेष्ट आफ हिमालयका ग्राहक, गायक उत्तम र्राई ।
नेपाली संस्कृतिमा अथिति सत्कारको महत्वपूर्ण ठाउँ छ र नेपालीहरुले अथिति सत्कारलाई हेरर नै कुन मान्छे कस्तो छ भन्ने अनुमान लगाउछ । श्रवण दाईको अथिति सत्कारलाई हेर्दा परदेशमा बसेर पनि उनले नेपाली संस्कृतिको नाम उच्चस्थानमा पुर्याउनुभएको छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपाली खानाको स्वादमा नेपाली मसलाको काम उनको त्यहि अथिति सत्कारले गरेको छ । विदेशमा खोलिएका नेपाली रेष्टुरा मध्येको नेपालीपन र स्वाद दिने रेष्टुरा मध्ये सानफ्रानसिस्कोको टेष्ट अफ हिमालय एक हो ।माया बाढ्ने क्रममा श्रवण दाई र उनका साथीहरुले आफ्नो रेष्टुरा भित्र मात्र माया बढाएका छैनन् रहेछ । उनीहरुले रेष्टुरा बाहिर पनि कयौ भोका र दुःखीहरुलाई माया बाडिरहेका रहेछन्, “करी विदआउट वरी” कार्यक्रम (www.currywithoutworry.org) अर्न्तगत । करी विदआउट बरी कार्यक्रमद्धारा उनीहरु हप्ताको एक पटक सानफ्रान्सिस्कोका गरीब दुःखीहरुलाई खाना खुवाउने काम गर्छन् । करी विदआउट बरीको परिकारमा नेपाली तरकारी, भात, दाल, सुख्खा रोटी खुवाइने गरीन्दो रहेछ । खाना खाने र खाना खुवानेहरु एक क्षणको लागि भए पनि विना सुर्ताका साथ खाना खाउन् भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम गरिएको रहेछ । त्यसको साथै अन्य यहाँका मानिसहरुलाई नेपाली खानाको स्वाद दिलाउने धेध्य पनि यस कार्यक्रमको रहेछ ।
विश्वको एउटा कुनाको एउटा सानो गाउँबाट आएर विश्वको ख्यात्रि्राप्त शहरमा धर्मको काम गर्न सक्नु ठूलै कुरा हो । ठूलो ठाउँ, ठूलो शहर, ठूलो कुरा, ठूलो सपना देख्नेहरुको कमी छैन । तर ठूलो ठाउँमा खाना खुवाउने सानो काम जस्तो लागे पनि त्यो कामले एउटा सानो मान्छेको मनमा कति ठूलो ठाउँ बनेको छ त्यो त्यहि व्यक्तिलाई नै थाहा होला । दिनभरी खान नपाएर भोको भएर मुसा कुदिरहेको भुडिमा पेटभर अन्नको दाना भरिदा कस्तो अनुभव होला । तर उनले सानफ्रानसिस्कोका भोकाको पेट भर्ने मात्र काम गरेका छैनन् । उनले साना साना नानीहरुको मुखमा खाना, तनमा लुगा र बस्नको लागि घर, “आमाको घर” दिएका छन् । आफ्नै आमा बाबाले दिन नसक्ने काम श्रवण दाई र उनका साथीहरुले गरीरहेका छन्, नेपालमा भएका केहि अनाथ बालबालिकाको लागि । उनीहरु आफ्नो खर्चमा केहि कटौती गर्छन् र त्यो रकम नेपाली बालबालिकाको लागि खर्च गर्छन् । उनीहरुले गरीरहेको कामको उपलब्धि गोदावरी स्थित आमाको घरमा देख्न सकिन्छ । आमाको घरले नेपालमा भएका अनाथ वालवालिकाको लागि आश्रय प्रदान गर्ने काम मात्र गरेको छैन, त्यहाँ उनीहरुले आमाको माया दिने आमा पाएका छन् । राम्रो शिक्षा, खाना र नाना पनि पाएका छन् । त्यो घर साँचै नै आमाको घर बनेको छ । आमाको घरलाई चलाउने वा भनौ त्यहाँ जीवन व्यतित गरिरहेका वालवालिकाहरुको लागि खाने, बस्ने, पढाउने लेखाउने सबै कुराको व्यवस्था श्रवण दाई र उनका साथीहरुले गरेका छन् । त्यस्तो शहर, जहाँ अरुको लागि पनि सोच्ने सम्म पनि फुर्सद हुदैन त्यहि शहरमा बसेर आफूले कमाएको पैसाले आफू मात्र हैन अरुको पनि जरुरत पूरा गर्न सक्नु अविश्वनिय लाग्छ तर यसलाई मूर्त बनाएका छन् श्रवण नेपाली र उनका सहयोगी साथीहरुले । जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय पनि भन्थे बुढापाकाले उनीहरुले गरेका कामदाई हेर्दा साँचै इच्छा र लगन भन्दा ठूलो केहि रहेनछ भन्ने लाग्छ । इच्छा गर्यो र त्यही अनुसार काम गर्दै गयो भने त्यो पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण श्रवण नेपालीले दिएका छन् ।
टेष्ट अफ हिमालयमा बसेर त्यहाँका दाजुभाई, दिदीवहिनीहरुसंग केहि समय विताउँदा यस्तो लाग्यो, जति धेरै उनीहरु नेपाल बाहिर बसेका छन् त्यति नै धेरै देशको लागि माया पलिराखेका छन् अनि त्यो माया बढ्ने क्रम जारी छ । “आफ्नो मातृभूमिलाई बाहिरबाट हेर्दा आमाको कोखलाई बाहिर बसेर हेरे जस्तै हुन्छ” भन्नुहुन्छ श्रवण दाई । टेष्ट अफ हिमालय हिमालयलाई श्रवण दाई “माया बाढ्ने ठाउँ भन्नुहुन्छ” र साँचै नै टेष्ट अफ हिमालय माया बाड्ने ठाँउ भएको छ । नेपालीको माया, त्रि्रो माया, हाम्रो माया …. नेपाल ।
नोटः यो लेख मैले पोहर साल (सेक्टेम्बर २००६ मा) अमेरीकाबाट घर फर्केपछि लेखेको थिए । मलाई टेष्ट अफ हिमालयमा लैजाने र श्रवण दाई र उहाँका सहयोगीहरुसंग भेटाउने साथी उत्तम र्राईको संझना आयो र यो लेख संम्प्रेषण गर्न मन लाग्यो । आज उत्तम र्राई यो संसारमा रहेनन् तर उनको याद सधै मेरो मनमा रहिरहने छ ।
Author sirjanaPosted on सेप्टेम्बर 28, 2007 अक्टोबर 1, 2007 Categories people and places
One thought on “माया बाड्ने श्रवण दाई”
अक्टोबर 10, 2007 मा 9:42 बिहान
Support the democracy movement of Burma…
अघिल्लो Previous post: फूल जस्तो जीवन
अर्को Next post: Mohawk: The Warrior Nation